Iindaba -Imbali yokuvelisa ityhubhu engenamthungo
Umbhobho oshushu oshushu wekhabhoni
Umbhobho wentsimbi ochanekileyo
Ingxubevange steel pipe
Umbhobho wentsimbi yesikwere
Okoxande Umbhobho intsimbi
Isikrini sentsimbi yeCorten
Nxiba ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo
Imbali yokuvelisa ityhubhu engenamthungo
Ngeminyaka yoo-1960 ngenxa yokuveliswa kwesigayo esitsha esiphakame kathathu (esaziwa njengeTransval mill), ezi ndlela ziphuculwe ngokukhawuleza Isila esitsha sibonakaliswa ngokujikeleza okukhawulezayo komngxuma ongasemva ujiko lokujika luza kutshintsha I-Angle eqengqelekayo, ngaloo ndlela kuthintela umsila ekubeni wenze oonxantathu abenza uhlobo lwemveliso umlinganiso wobubanzi bangaphandle kubukhulu bodonga bandisiwe ukusuka kwi-12 kuye kwi-35, engenako ukuvelisa kuphela iityhubhu ezibiyelweyo, kodwa kunye nokuphucula amandla emveliso.
Indlela yesiko yokufaka umbhobho kukuba i-billet igutywa ngoxinzelelo lwamanzi kwaye yandiswa yenziwa ngekomityi yoboya ngombhobho wokuqengqeleka apho i-mandrel ende ifakwa ezantsi kwendebe ye-capillary ngentonga yokutyhala kwaye ngokuthe ngcembe incitshiswe kuthotho lwemingxunya uhlobo lwesakhelo sokufa esincinci, isongelwe phezulu kwimibhobho Olu hlobo lwendlela yokuvelisa lunotyalo-mali oluncinci kwizixhobo kwaye lunokusetyenziselwa ukwenza i-billet eqhubekayo, inokuvelisa ububanzi ukuya kuthi ga kwi-1070mm, ubukhulu bodonga ukuya kwi-200mm yombhobho owongezelelekileyo, kodwa ukusebenza kwemveliso ephantsi, udonga olujiyileyo, ubude obufutshane kumbhobho kunokusebenza kakuhle Emva kokuvela kwenkqubo entsha ye-CPE, iityhubhu ezingenanto zixutywe ngokuqengqeleka komnqamlezo kwaye zandiswa zangena kwiityhubhu ngokuziqengqa okuphezulu emva kokuvala, okoyisa indlela yesiNtu.
Ezinye iintsilelo zemveliso yombhobho engenamthungo iye yaba yindlela ebhetele yezibonelelo zoqoqosho.
Kwimveliso yombhobho we-extrusion, i-billet ejikeleziweyo ecekecekeyo iqala ukugqojozwa okanye ukuphinda yenziwe igama kwaye emva koko ishushu ngokufakwa ibhafu yetyuwa ishushu, kwaye umphezulu wangaphakathi uthanjisiwe nge-lubricant kwaye ifakwa kwi-extruder, ngomngxunya wokufa kunye nangesinyithi isithuba se-annular phakathi kwe-mandrel kufakwa kwiityhubhu zentsimbi.
Isetyenziselwa ukuvelisa imibhobho esezantsi yeplastiki, imibhobho ekhethekileyo, imibhobho edityanisiweyo kunye nemibhobho enemibala yetyhubhu yensimbi, njl njl. Le ndlela inoluhlu olubanzi lwemveliso, kodwa isivuno siphantsi Kwiminyaka yakutshanje, ngenxa yezinto zokubumba, izinto zokuthambisa, isantya se-extrusion njalo njalo ziphuculwe, ukuveliswa kombhobho we-extrusion nako kuye kwaphuhliswa.
Isikhokelo sekhoyili yokujija ityhubhu ikwabizwa ngokuba yiDiessel ityhubhu ye-capillary ityhubhu ene-mandrel ende ityhubhu yetyhubhu yentsimbi eqengqelekayo kwilitye lesikhokelo. Njengokuveliswa kwe-mandrel ende, ityhubhu yentsimbi eludongeni lwangaphakathi olugudileyo, kwaye akukho kukrwela; Kodwa ixabiso lesixhobo likhulu, lungisa i-complex.It ikakhulu isetyenziselwa ukuvelisa i-150mm ububanzi beetyhubhu zentsimbi zecarbon kwezi zilandelayo zisebenzisa i-USES.At ngoku, kunqabile ukuba isetyenziswe kwaye ayinathemba liphuculo.
Imveliso ye-tube ejikelezayo iya kuba tyaba okanye ingenanto engenanto kumatshini wokujikeleza ngokusebenzisa enye okanye nangaphezulu ojikelezayo ojikeleze umbhobho wentsimbi.Ukuchaneka okuphezulu, iipropathi ezilungileyo zoomatshini, uluhlu olubanzi lobukhulu, kodwa ukusebenza kakuhle kwemveliso kusezantsi. -imibhobho yesinyithi yentsimbi, kodwa iphinde isetyenziswe ngakumbi kwimveliso.
Ngaphandle kwezixhobo zasekhaya, izikhongozeli zeekhemikhali kunye neendawo zomatshini, ubukhulu becala zisetyenziswa kwishishini lezomkhosi.
Ngeminyaka yoo-1970, ukusebenzisa indlela eyomeleleyo yokusonta kuye kwaveliswa ngobubanzi obufikelela ku-6000mm, ubukhulu kunye nobukhulu bodonga umyinge ongaphezulu kwe-10000 ubukhulu bepayipi enkulu ebhityileyo kunye nokufakwa kombhobho.
Ukuqengqeleka okubandayo, imveliso ebandayo yemizobo yokuvelisa isangqa esincinci, udonga oluchanekileyo kunye nemveliso ekhethekileyo yentsimbi. Izixhobo zemveliso yenkqubo yokujikeleza inkqubo.
Kwi-1960s, yaqala ukukhula kwicala lesantya esiphezulu, esinemigca emininzi, ukubetha okude kunye netyhubhu ende engenanto.Ukongeza, umatshini wokugaya umbhobho omncinci oqengqelekayo nawo uphuhlisiwe, osetyenziselwa ukuvelisa Ubunzima obucekeceke kakhulu kumbhobho wentsimbi nodonga olungaphantsi kwe-1mm Izixhobo ehlelayo ebandayo entsonkothileyo, processing isixhobo kunzima, kunye ezahlukeneyo kunye nokuguqulwa iinkcukacha akukho bhetyebhetye. Inkqubo edityanisiweyo yokuqengqeleka ebandayo kunye nomzobo obandayo ihlala yamkelwa, oko kukuthi, udonga kuqala luyancitshiswa ngokugodola okubandayo ukufumana i-deformation enkulu, emva koko iintlobo ezahlukeneyo zokulinganisa zifunyenwe ngetayile ebandayo yokuzoba.
Umgangatho we-17, iSakhiwo seXingmei, kwiphondo laseLiaocheng Shandong, China.